Momba anay - CANNABIZ HIGH CO., LTD
CANNABIZ HIGH CO., LTD dia mpanamboatra fitaratra manana 5 taona amin'ny fitsofana fitaratra.Manam-pahaizana manokana amin'ny fanondranana fantsona rano fitaratra mankany Amerika Avaratra (Etazonia & Kanada) sy NL.Ny kalitao no fiainanay, tato anatin'ny taona vitsivitsy, vera borosilicate avo lenta ihany no ampiasainay ary tsara amin'ny famolavolana OEM / ODM miaraka amin'ny fifandraisana malefaka eo amin'ny mpanjifanay.
"Ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa no fikatsahana tsy tapaka", ankoatra ny vokatra tsara dia miezaka ihany koa izahay mba hanome serivisy tsara ho an'ny mpanjifanay, Miatrika amim-pahavitrihana ny olana ateraky ny mpanjifa, ary ny valiny ao anatin'ny 24 ora amin'ny andro fiasana.
Ho fanampin'ny fitsofana fitaratra izay ny orinasantsika, dia manorina fiaraha-miasa tsara amin'ny mpanamboatra grinder, rolling tray, quartz banger, sns.
Manome serivisy fivarotana tokana ho an'ny mpanjifanay ary mampifandray ireo kojakoja ireo ao anaty entana iray miaraka amin'ny vera.
Manana fitaovana famokarana am-polony izahay amin'ny atrikasa famokarana telo, miaraka amin'ny velarantany mihoatra ny 1000 metatra toradroa.Maherin'ny 10 ny mpiasa ara-teknika efa 8 taona mahery, ary 30-50 ny mpiasan'ny orinasa.
velarantany mihoatra ny 1000 metatra toradroa
mpiasa ara-teknika efa antitra mihoatra ny 10 mihoatra ny 8 taona
Mpiasan'ny orinasa 30-50
Manana serivisy rojo famatsiana feno izahay mba hanomezana izay ilainao Ho an'ny fepetra takian'ny vokatra rehetra dia hojerentsika tsara ny kalitaon'ny vokatra alohan'ny fandefasana mba hahazoana antoka fa mahafeno fepetra ny vokatra tsirairay.Amin'izay fotoana izay ihany koa dia halefanay aminao ny sarin'ny vokatra hanamarina fa mety ny vokatra alohan'ny handefasana azy ho anao.Manana mpanome tolotra ara-pitaovana tena tsara izahay izay afaka miantoka ny fahatongavan'ny entanao soa aman-tsara, ary mampanantena izahay fa raha simba na very ny entanao, dia hanome onitra anao araka izany izahay.Ny tanjonay dia ny ho lasa mpamatsy maharitra anao, noho izany dia manana fepetra hentitra momba ny kalitao, ny vidiny ary ny serivisy ny vokatra, miaraka amin'izay koa, matoky tena izahay fa afaka ho lasa mpamatsy volamena anao.
Manantena ny hiara-hiasa aminao izahay.